How to relieve your stress - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကွုံလဘေုံဘဝဆေိုတဲ့ ရှုပျထှေးတဲ့လောကကွီးမှာ လူဖွဈလာပွီဆိုရငျ စိတျဖိစီးမှုကို အားလုံးကွုံရသူတှခေညျြးပါပဲ။ ဒီလိုစိတျဖိစီးမှုတှကေို ဘယျလိုပုံစံနဲ့အကောငျးဆုံးပွနျလညျတုနျ့ပွနျကွမလဲဆိုတာကို အနညျးငယျတငျပွလိုပါတယျ။
၁. အကောငျးမွငျစိတျမှေးပါ။ မိမိရဲ့ပတျဝနျးကငျြက ညဈညမျးငွူစုခငျြစရာမြားကို တတျနိုငျသမြှ လဈလြူရှုပါ။
၂. ကိုယျ့တဈနိုငျတဈပိုငျ လုပျကိုငျနိုငျသမြှကို အသိအမှတျပွုပါ၊ ဂုဏျယူပါ။ ကိုယျလကျလှမျးဖို့ ဝေးလှနျးတဲ့အရာမြားကို ခကျြခငျြးမရနိုငျတာကို လကျခံပါ။ ခှနျအားအဖွဈပွောငျးလဲပွီး မိမိကိုယျကိုအကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဆကျလကျကွိုးစားပါ။
၃. စိတျဖိစီးမှုလြှော့ခမြှုဆိုငျရာ ကုထုံးမြားကို လလေ့ာပါ၊ လကေ့ငျြ့ပါ။ (ဥပမာ ယောဂကငျြ့ခွငျး၊ စိတျဖိစီးမှုလြှော့ခမြှုဆိုငျရာ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုသင်ျခနျးစာမြားကိုလလေ့ာခွငျး)
၄. သနျ့ရှငျးပွီး ကနျြးမာရေးနှငျ့ညီညှတျကာ အာဟာရမြှတသော အစားအစာမြားကိုစားပေးပါ။
၅. ကိုယျလကျလကေ့ကျြ့ခနျးကို နစေ့ဉျပုံမှနျလုပျပေးပါ။
၆. ကိုယျ့အတှကျအပနျးဖွခြေိနျကို ဝါသနာပါရာအလုပျတဈခုခုလုပျခွငျး၊ ခရီးသှားခွငျးတို့ဖွငျ့ အကောငျးဆုံးအသုံးခပြါ။
၇. အိပျရေးဝဝအိပျပွီး အိပျခြိနျမှနျပါစေ။ အိပျရေးဝမောငျအိပျခွငျးဟာ သဘာဝကကြ စိတျဖိစီးမှုလြှော့ခခြွငျးတဈမြိုးပါပဲ။
၈. အရကျ၊ဆေးလိပျနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါးမြားသုံးစှဲခွငျးကိုရှောငျကဉျြပါ။ ဒါတှဟောသငျ့ကို စိတျဖိစီးမှုကနေ တဈခဏတာသာမလြေ့ော့ လှတျမွောကျစမှောပါ။
၉. နထေိုငျစားသောကျပုံမှနျကနျတာတောငျ စိတျဖိစီးကနေ ဘယျလိုမှရုနျးမထှကျနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ စိတျကနျြးမာရေးဆိုငျရာဆရာဝနျမြားနှငျ့ တိုငျပငျပွီးကုသပါလို့ အကွံပွုလိုကျရပါတယျ။
ကြုံလေဘုံဘဝေဆိုတဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးမှာ လူဖြစ်လာပြီဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုကို အားလုံးကြုံရသူတွေချည်းပါပဲ။ ဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လည်တုန့်ပြန်ကြမလဲဆိုတာကို အနည်းငယ်တင်ပြလိုပါတယ်။
၁. အကောင်းမြင်စိတ်မွေးပါ။ မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ညစ်ညမ်းငြူစုချင်စရာများကို တတ်နိုင်သမျှ လစ်လျူရှုပါ။
၂. ကိုယ့်တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်သမျှကို အသိအမှတ်ပြုပါ၊ ဂုဏ်ယူပါ။ ကိုယ်လက်လှမ်းဖို့ ဝေးလွန်းတဲ့အရာများကို ချက်ချင်းမရနိုင်တာကို လက်ခံပါ။ ခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆက်လက်ကြိုးစားပါ။
၃. စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချမှုဆိုင်ရာ ကုထုံးများကို လေ့လာပါ၊ လေ့ကျင့်ပါ။ (ဥပမာ ယောဂကျင့်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသင်္ခန်းစာများကိုလေ့လာခြင်း)
၄. သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ကာ အာဟာရမျှတသော အစားအစာများကိုစားပေးပါ။
၅. ကိုယ်လက်လေ့ကျက့်ခန်းကို နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ။
၆. ကိုယ့်အတွက်အပန်းဖြေချိန်ကို ဝါသနာပါရာအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းတို့ဖြင့် အကောင်းဆုံးအသုံးချပါ။
၇. အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပြီး အိပ်ချိန်မှန်ပါစေ။ အိပ်ရေးဝမောင်အိပ်ခြင်းဟာ သဘာဝကျကျ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
၈. အရက်၊ဆေးလိပ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။ ဒါတွေဟာသင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုကနေ တစ်ခဏတာသာမေ့လျော့ လွတ်မြောက်စေမှာပါ။
၉. နေထိုင်စားသောက်ပုံမှန်ကန်တာတောင် စိတ်ဖိစီးကနေ ဘယ်လိုမှရုန်းမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ပြီးကုသပါလို့ အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။